Bixiyeyaashayada - Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Maureen Miller-Griffie MSN	FNP-BC	APRN	MS »
Maureen Miller-Griffie, waa kalkaaliye caafimaad oo qoys oo shahaado haysta oo in ka badan 40 sano khibrad u leh kalkaalinta. Waxay diblooma kalkaalinnimo ka qaadatay Cisbitaalka Altoona ee Kalkaalisada iyo shahaadada Masterka ee Sayniska Kalkaalinta Caafimaadka ee Jaamacadda Walden.
Katrina Thoma RN	MSN	CPNP-PC	DPH »
Katrina Thoma, Agaasimaha Adeegyada Caafimaadka ee Sadler, waa shahaado daryeelka aasaasiga ah ee carruurta waxayna ku takhasustay cilladaha wadnaha ee ku dhasha carruurta iyo daryeelka degdegga ah.
Gordon Miller DO »
Dr. Gordon Miller, dhakhtarka qoyska ee Sadler, ayaa bixiya daryeelka qoyska. Waxa uu ku tababaranayay koonfurta dhexe ee Pennsylvania 12kii sano ee la soo dhaafay ka dib markii uu ka fariistay shaqada milatari ee Ciidanka Mareykanka.
Lakshmi Polavarapu MD »
Dr. Lakshmi Polavarapu, Agaasimaha shaybaadhka ee Sadler, wuxuu diiradda saaraa qoyska iyo daawada qabatinka. Waxay haysataa shahaado daawaynta lagu kaalmeeyay xadgudubka opioid waxayna xubin ka tahay guddiga Hawsha ee Opiate Prescribing with Partnership for Better Health.
Stephen C. Phillips MPH	DO »
Dr. Stephen Phillips, Takhtarka Qoyska ee Sadler, wuxuu leeyahay waayo-aragnimo 30 sano ka badan oo u adeegaya bukaannada da ‘kasta leh. Waxa uu hore u ahaa dhakhtar qoys oo ka tirsan Ciidanka Mareykanka ka hor inta uusan shaqada ka fariisan 2017.
Philip Caterbone DO »
Dr. Caterbone, oo ah dhakhtar shahaado haysta, waxa uu ku dhashay kuna koray Lancaster, PA. Wuxuu ka qalin jabiyay Kuliyadda Philadelphia ee Daawada Osteopathic.
Ama Graham-Kremers waa agaasimaha Adeegyada Ilkaha ee caafimaadka Sadler, waxayna ku biirtay kooxda Ogosto 2020.
Dr. Tina Taylor waxay shahaadadeeda koowaad ee Sayniska ka qaadatay Jaamacadda California San Diego, waxayna sii wadatay inay ku kasbato dhakhtarkeeda shahaadada daawaynta ilkaha ee Arizona School of Dentistry & Oral Health, iyo Shahaadada Caafimaadka Dadweynaha oo ay xooga saarayso AT Weli Jaamacad.
Dr. Taylor waxa uu ku dhashay Flagstaff, AZ. halkaas oo qaddarinta bannaanka weyn lagu beeray. Laga soo bilaabo buuraha ilaa badweynta, Dr. Taylor wuxuu ku koray Degmada San Diego.
Dr. Sunczerae Kushkituah waxa uu ka qaatay jaamacada Syracuse University dual Bachelor of Science degree in Biology and Psychology. Waxay sii wadatay inay shahaadada Doctor of Dental Surgery ka qaadatay Jaamacadda New York, Kuliyadda Ilkaha.
Lisa Juliana, oo ah dhaqtarka nadaafadda ilkaha ee caafimaadka dadweynaha, ayaa shati ku haysata suuxinta gudaha Sadler.
Kimberly Bury waa dhaqtarka nadaafadda ilkaha ee caafimaadka dadweynaha iyo maamulaha Ilkaha ee Xarunta Caafimaadka Sadler, shahaado ku leh suuxinta gudaha. Kahor inta aysan ku biirin Sadler 2017, waxay ka shaqeysay xirfad gaar ah ku dhawaad 10 sano.
Carol Cable PHDHP »
Dhakhaatiirta nadaafadda ilkaha ee caafimaadka dadweynaha ee Sadler, Carol Cable waxay ku raaxaystaa inay bukaannada ku baraan muhiimadda caafimaadka afka iyo sida ay u saamayso caafimaadka guud ee jidhkaaga. Waxay haysataa shatiga suuxinta maxalliga ah waxaana lagu shahaadeeyay laser-diode.
Rebecca M. Schwartz PHDHP waa caafimaadka dadweynaha dhaqtarka nadaafadda ilkaha oo shahaado ku siisay suuxinta gudaha Xarunta Caafimaadka Sadler.
Natalie Toski MD »
Natalie Toski waa takhtar cilmi nafsi oo u qalma guddiga oo bixiya adeegyada dhimirka iyo maamulka daawaynta ee dhalinyarada iyo dadka waaweyn. Iyadu waa shaqaale qandaraas ku haysta Sadler Health iyada oo loo sii marayo Array Behavioral Care.
Kristen Ruis LCSW »
Sida mid ka mid ah Khabiirka Caafimaadka Dhaqanka ee Sadler, Kristen Ruis waxay diiradda saartaa niyad-jabka, welwelka, arrimaha xiriirka, murugada/luminta, joojinta tubaakada, isticmaalka maandooriyaha iyo barbaarinta.
Rick Gross LCSW »
Rick wuxuu ka qalin jabiyay Virginia Tech isagoo laba jeer ku takhasusay Cilmi-nafsiga iyo Falsafada ee 1999, iyo Jaamacadda Katooliga oo uu la qaatay Masters of Social Work ee 2002.
Xarunta Caafimaadka ee Sadler » Bixiyeyaashayada